Tra-boina tamin'ny fitsangantsanganana an'habakabaka farany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » France Travel News » Tra-boina tamin'ny fitsangantsanganana an'habakabaka farany
Ny pacte de la voyage de la voyage dia mamela heloka rehefa mandetika masina ny reniranon'i Ganges ny 12 aprily
Ny areti-mandringana COVID-19 matahotra dia mitohy manimba ny fizahan-tany sy mitety an'izao tontolo izao.
India dia nitatitra ny androny ratsy kokoa noho ny tranga COVID-19 vaovao hatramin'ny nanombohan'ny valan'aretina omaly izay nahatratra 300,000 tao anatin'ny iray andro.
Ny governemanta manerantany dia mamoaka fampitandremana momba ny dia mankany India avy any Etazonia ka hatrany Alemana ary maro hafa.
Satria mihoatra ny fahaizan'ny hopitaly ny oksizenina, tsy ampy ihany koa ny oksizenina ary misy olona maty any amin'ny hopitaly satria lany ny rivotra.
Ny niharam-boina farany tao amin'ny pacte de la femme de air dia ny fifanarahana nifanaovan'i India sy Sri Lanka izay nanomboka ny 26 aprily 2021. Araka ny hita ankehitriny dia nahemotra io daty io noho ny fitomboan'ny isan'ny maty tao India noho ny coronavirus.
Krizy COVID any India mitohy miharatsy hatrany amina tranga efa ho 300,000 2 voalaza omaly - ny andro iray lehibe indrindra mandraka androany. Miezaka ny hanome toky ny olom-pireneny ny governemanta fa ezahina ny hahazoana oksizenina bebe kokoa ho an'ny mpamonjy rivotra satria misy hopitaly sasany manana olona XNUMX isaky ny farafara ary olona maty satria lany ny kojakoja oksizenina mamelona azy ireo.
Ny firenena mpifanila vodirindrina amin'i Sri Lanka dia nikasa ny hisidina amin'ny tanàna maro any India ka Kushinagar dia tanàna iray izay nanirian'i India indrindra ny hisian'ny sidina hiverina any amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena vao nohavaozina. Ny vokatr'ity fanavaozana rehetra ity dia miomana handray ny mpandeha dia mijanona ankehitriny.